Maansadii Basan-baas Abwaan Shevodinio Mohammed Ahmed "Mudiir"(Hadhwanaagnews) Tuesday, September 11, 2012 Marka hore waxaan idiin soo dirayaa salaan qaali ah Bahda shabakadda Hadhwanaag-Media iyo Asxaabtayda sharafta badan
Marka hore waxaan idiin soo dirayaa salaan qaali ah Bahda shabakadda Hadhwanaag-Media iyo Asxaabtayda sharafta badan ee Daafaha Adduunka ku sugan.
Silsiladdan basan-baas waa mid ay wadaaggeen Hal-abuurro Da´yar oo rabbi ku Manneystay curin hoddana iyo Aftahannimo aan la´dhaysan karin. waxay ka hadlayan waayaha saluugga badan ee loo yaqaanno "Immigrant Seek Asylum" soogallootiga billaa sharciga ee ku raadinaya magangalyo nololeed! ee ay ku sugan yihin Dhallinyarada iyo waayeel
Soomaaliyeed ee ku nool Qaaradda yurub gaar ahaan waddamada la isku
yidhaahdo midowga yurub "European Union". waxa aan fursad u helay (2009-kii) ina aan Daahfuro silsiladdan qiimaha ku salaysan ee Basan-baas!waxaa xusid iyo qaddarin mudan labada Maanso-yahaan ee dhadhanka iyo quruxda u sameeyay SilsiladdaAbwaan Cabdinaasir Axmed Muuse,Abwaan Faysal Awcabdi Cambalaash. waxa aan ku billaabay sidan:
Ninka gabayga biirshiyo
Ninka bidhiiq sameeyabaanigaa ka badiye E
baasha kaga yaalle
Barbarkaygana isma soo taagi karo
Naasirkii bilaan jirayMurtidana bogsiin jirayBaayjka hadalku lee yahay iyobunka aan wadaagna,
Beerraha libaaxaba hadduu bahal yari soo galoAarka bisleeyeAnnaguna bayaankii Murti-maal baddiisiyo Baaxaddiisi baa nahay!
Bal maqal maansadayda Basan-baas
waa badweynto kale,Berrita la baxayaa baagna waa la soo noqonbacad iyo kulaaylba Bogga lagu hayaayeBuubkeedu badanaBeledkiina dheera,Dadkii way bislaadenmarna way buseelenwaxay beerka ku hayaanXaggaad uga baxdaayooku Baad-baaddi doonta!
Boqorkoo baad-baadshofarahaa bidhaantood Biljaam iyo baraseelislaga waayin Buuggababartan way ku soo noqonBismillaahi mooyee, Baashaal ciyaar iyo Qosol baa bay baratee Budhkii wuu dhammaadeeBir baa la isla dhacayaa!
Yurubta la booddabartii aad istaagtanbaylahda ku badanoobilyan baad arkaysasidii buushi meel-yaal,dadkii way basaasen sharci baa ka booddobidhaantiisa raadshaan,Hablahi billaan jiray ee biligtoodu dheeraydbalwadaayste jiifaayBasaboor kuu doonnaan,inamadi boqolkiyosoo jidhay bariyaddaBartan markay yimaaddenBiinooyaddii la baal marayAfka ay ku boobben!Maxaa balaayo soo taalu baasku weerarreyBalaayada dhacaysanaAllahayoow na baal mariBuubkiyo wareerkanaBidhaantooda naga hay.
Guddoomiyaha ururka S.y.n-Group
Shevodinio Mohammed Ahmed "Mudiir"
E-mail: shevodinio7707@gmail.com Friendly Link